नेपालका ७७ वटै जिल्लामा कोरोनाका संक्रमित, कूल संक्रमितको संख्या १२ हजार नाघ्यो « Mechipost.com
नेपालका ७७ वटै जिल्लामा कोरोनाका संक्रमित, कूल संक्रमितको संख्या १२ हजार नाघ्यो
प्रकाशित मिति: १३ असार २०७७, शनिबार २०:५६
फिदिम । नेपालका ७७ वटै जिल्लामा कोरोना भाइरसका संक्रमित फेला परेका छन् । ७७ वटै जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिइसक्दा देशभर कूल संक्रमितको संख्या १२ हजार नाघेको छ ।
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टा (शुक्रवार दिउँसो ४ बजेदेखि शनिवार दिउँसो ४ बजेसम्म) मा थप ५५४ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वृद्धिसँगै शनिवार अपराह्नसम्म देशभरि पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या १२,३०९ पुगेको छ ।
तीमध्ये २,८३४ जना निको भएका छन् भने २८ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । मन्त्रालयले थप १३६ जना निको भएको तथा एक जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको हो ।
अहिलेसम्म प्रदेश नं २ र ५ मा सर्वाधिक संख्यामा कोभिड–१९ भएका व्यक्ति भेटिएका छन् । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पनि संक्रमितको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ ।
शुक्रवार ५९३ जना, बिहीवार ४३४ जना र बुधवार ६२९ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । गत असार ४ गते एकै दिन सर्वाधिक ६७१ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
को हुन् आजका मृतक ?
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित कैलालीका एक ५० वर्षीय पुरुषको चितवनमा मृत्यु भएको हो । भारतमा उपचार गराउँदै आएका ती व्यक्तिलाई भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेजमा लगिँदा असार ११ गते कोभिड–१९ पुष्टि भएको थियो।
“भरतपुर अस्पतालको आइसोलेशनमा राखी उपचारका क्रममा आज मिति २०७७ असार १३ गते बिहान बजे (उनको) मृत्यु भएको हो” डा. गौतमले भन्नुभयो ।
अहिलेसम्म रसुवासहित सबै जिल्लामा कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित व्यक्ति फेला परेका छन् । हिमाली जिल्ला रसुवामा आठ महिला र एक पुरुषमा कोभिड–१९ पुष्टि भएपछि सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा कोरोनाभाइरस पुगेको प्रमाणित भएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार विगत २४ घण्टामा ४,६०६ वटा नमुनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो । यससँगै कोरोनाभाइरस संख्मण पुष्टि गर्न प्रयोग हुने उक्त परीक्षणको संख्या २,१०,८७६ पुगेको छ ।
क्वारन्टीनमा भएका मानिसको परीक्षणमा तीव्रता दिइएकाले सङ्क्रमितको संख्या बढेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । अहिले देशभरि ६५,००० जनाभन्दा बढी व्यक्ति क्वारन्टीनमा छन् । तीमध्ये अधिकांश भारतबाट फर्किएका हुन् ।
संक्रमितको कुल संख्या जेठ ३१ गते ४,६१४ थियो भने जेठ २१ गते २,३०० थियो । जेठ १५ गते संक्रमितको संख्या १,००० नाघेको थियो । जेठ ९ गते संक्रमितको संख्या ५०० नाघेको थियो ।
शनिवार पुष्टि भएका संक्रमितहरू विभिन्न उमेर समूहका छन् । तर तिनमा युवा र पुरुषको बाहुल्य छ । डोटीमा ४० महिला र ३१ पुरुषसहित कुल ७१ संक्रमित भएका छन् ।
बाजुरामा ६६, प्युठानमा ४९, रौतहटमा ३४, दाङमा ३१, महोत्तरीमा ३०, पाल्पामा २६, बैतडीमा २४ र स्याङ्जामा २१ जनामा पनि संक्रमण देखिएको छ । काठमाण्डू उपत्यकाका दुई जिल्ला काठमाण्डौँ र भक्तपुरमा पनि क्रमशः चार र एक संक्रमित थपिएका छन् । (बीबीसी नेपालीको सहयोगमा)